Banco Itaú 6.8.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.8.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
အဘယ်အရာကိုသင်ရှာနေလဲ? တစ်နေ့သူတို့ရဲ့တစ်ရက်တွင်ပိုမိုလုံခြုံရေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်? Itaúဘဏ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကလစ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှအမျိုးမျိုးသောဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Itaúဘဏ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နှင့်လည်းအများအပြားနည်းလမ်းငွေပေးချေစေ။ သင်ကကင်မရာဖုန်းနှင့်ဘားကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်သို့မဟုတ်တစ်တိုက်ရိုက် PDF ကိုအီးမေးလ်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ရုံပုံနှိပ်ယူပြီးမပါဘဲ WhatsApp ကို, Facebook, Messenger ကို, SMS နှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်ဆဲလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖို့ဘောက်ချာပေးပို့ပါ။
သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြောင်းကောင်းပြီ, ထိုဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာ! သူတို့၏လွှဲပြောင်းလုပ်နေအိမ်စွန့်ခွာစစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်ငွေစုအကောင့်အသစ်များ၏ချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်စစ်ဆေးနှင့်ပစ်လွှတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုမြင်ရဖို့လိုပါတယ်မရှိတော့ကြံစည်ကြသနည်း
app ကိုနှင့်အတူသငျသညျ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုလွှဲပြောင်းစေနိုင်သည်။
သင့်အကောင့်အပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံ, နှစ်ဦးစလုံးဒက်ဘစ်ကဒ်အပေါ်ဝယ်ယူမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သငျသညျဘဏ်လျှောက်လွှာကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူချင်သောအချိန်အပြင်သင့်လက်ရှိအကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်ငွေစုနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အဆိုပါဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျItaúအကောင့်အသံကိုကျွန်တော် command ကိုအားဖြင့်လွှဲပြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်အခြားဘဏ်ထဲမှာအကောင့်စစ်ဆေးနေ။ သင်တို့သည်လည်း app ကိုမှာသင့်ရဲ့ကြိုတင်ငွေဖြည့်မိုဘိုင်းအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးItaú client ကိုဖြစ်ကြသည်သောသူတို့အဘို့လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။
reinaldo စတိုး 588 322.08k
APK ဗားရွင္း 6.8.8
Release date: 2019-05-21 00:22:40